कामकुरो पन्छाउने बानीलाई के गर्ने होला? | युवाहरू सोध्छन्‌
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको ईवी एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्रोएसियन क्षोसा ग्रीक चिचेवा चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार डच डाँग्मे डेनिश तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज मले मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन रूसी रोमानियन लिथुआनियन शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सामोअन सिंहला सिबेम्बा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
‘जब पऱ्‍यो राती अनि बूढी ताती’ भनेझैँ के तपाईँ पनि आफूले गर्नुपर्ने काम र होमवर्कहरू समय भएसम्म थन्काएर राख्ने गर्नुहुन्छ? कामकुरो पन्छाउने बानी तपाईँले छाड्‌नै पर्छ! यो लेखले तपाईँलाई निम्न अवस्थाहरूमा पनि कामकुरो पन्छाउने बानी हटाउन मदत गर्छ:
काम गर्न ढिला भएकोले अत्यास लाग्दा।
काम गर्ने जाँगरै नहुँदा।
अत्यन्तै व्यस्त हुँदा।
यो लेख पढिसकेपछि कामकुरो पन्छाउने बानीबारे क्विज खेलौँ।
बाइबलमा कामकुरो पन्छाउँदा हुने परिणामबारे यस्तो लेखिएको छ: “बतासको विचार गर्नेले कहिल्यै छर्दैन, औ बादलमा नजर राख्नेले कहिल्यै कटनी गर्दैन।”—उपदेशक ११:४.
मानिसहरू किन आफ्नो काम पन्छाउँछन्‌, त्यसका केही कारणहरू विचार गरौँ र यो बानी कसरी हटाउन सकिन्छ, हेरौँ।
हो कुनै काम यति गाह्रो देखिन्छ कि त्यसलाई पन्छाउनु नै बेस लाग्न सक्छ। यसो गर्नुको सट्टा अरू राम्रो तरिकाहरू विचार गरौँ।
कामलाई स-सानो भागमा छुट्ट्याउनुहोस्‌। मेलिसा नाम गरेकी एक युवती यसो भन्छिन्‌: “काम सिद्ध्याउन साह्रै ढिला भइसकेको छ भने पनि म एक पटकमा एउटा काम गरेर समयमा सिद्ध्याउन प्रयास गर्छु।”
सकेसम्म चाँडो सुरु गर्नुहोस्‌। “काम पाउने बित्तिकै सुरु गरिहाल्नुहोस्‌। त्यो कामलाई गर्नु पर्ने कामहरूको सूचीमा राखिहाल्नुहोस्‌। अथवा त्यो काम गर्ने कुनै तरिकाहरू मनमा आउने बित्तिकै बिर्सिनअघि नै लेखिहाल्नुहोस्‌। यसो गर्नु सानो काम जस्तो लागे पनि गरिहाल्नुहोस्‌।”–विरा
मदत माग्नुहोस्‌। तपाईँको आमाबुबा र शिक्षकहरूले पनि तपाईँको जस्तै समस्याहरू सामना गर्नुभएको होला। त्यसोभए उहाँहरूको अनुभव सोधिहेरे कसो होला? उहाँहरूले तपाईँलाई कुन तरिकाले काम गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर बताउन सक्नुहुन्छ होला अनि योजना बनाउन पनि मदत गर्न सक्नुहुन्छ होला।
सुझाव “तालिका बनाउनुहोस्‌। हुनत तालिका बनाएपछि तपाईँ व्यवस्थित हुनुपर्छ अनि त्यसअनुसार चल्न हार मान्‍नु हुँदैन। तर यसो गर्नुभयो भने तपाईँको सबै काम समयमै सिद्धिन्छ।”—एब्बी
तपाईँलाई रमाइलो नलाग्ने किसिमको काम गर्नुपर्ने छ भने प्रायजसो त्यो पूरा गर्न झन्झटिलो लाग्न सक्छ। तपाईँले त्यस्तो जिम्मेवारी पाउनुभयो भने त्यो पूरा गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ? तल दिइएको सुझाव लागू गर्न प्रयास गर्नुहोस्‌।
काम चाँडो पूरा गर्नुपर्ने कारण विचार गर्नुहोस्‌। उदाहरणको लागि, काम पूरा भएपछि तपाईँलाई कत्ति आनन्द लाग्नेछ, कल्पना गर्नुहोस्‌। एमी नाम गरेकी एक युवती यसो भन्छिन्‌: “समयमै काम पूरा गर्न सक्दा वा समयभन्दा अघि नै काम सिद्ध्याएर आरामसँग बस्न पाउँदा मलाई असाध्यै आनन्द लाग्छ।”
काम पूरा गर्न ढिला गर्दा के हुन्छ, विचार गर्नुहोस्‌। ढिलासुस्ती गर्नुभयो भने तनाव बढ्‌दै जान्छ र काम पूरा नहुने सम्भावना पनि उति नै बढ्‌छ। बाइबल भन्छ: “मानिसले जे रोप्छ त्यही फल्छ।”—गलाती ६:७, पढ्‌न सजिलो संस्करण.
काम जहिले पूरा गर्नुपर्ने हो, त्योभन्दा अघि नै पूरा गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुहोस्‌। आलिसिया नाम गरेकी एक युवती यसो भन्छिन्‌: “म काम पूरा गर्ने समयभन्दा एक-दुई दिन अघि नै पूरा गर्नुपर्छ भनेर सोच्छु। यसो गर्दा पछि फेरि आफ्नो कामलाई दोहोऱ्‍याएर हेर्न सक्छु अनि मसँग अझै एक-दुई दिन बाँकी पनि हुन्छ।”
सुझाव “यो सबै सोचाइको कुरा हो। आफैलाई यसो भन्‍नुहोस्‌: ‘जे गर्नु छ, त्यो म गर्छु अनि कुनै कुराले मलाई रोक्न सक्दैन।’ त्यस्तो कुरा आफ्नो दिमागमा ठप्प राखिसकेपछि जे गर्नुपर्ने छ, त्यो गरिन्छ।”—एलेक्सिस्‌
नेथन नाम गरेका एक युवक यसो भन्छन्‌: “प्राय मानिसहरूले मलाई अल्छी भनेर बोलाउँछन्‌। तर कहाँ त्यसो हुनु! म कति व्यस्त छु भनेर तिनीहरूलाई थाहै छैन।” तपाईँले पनि नेथनले जस्तै महसुस गर्नुभएको छ भने यी सुझावहरू लागू गर्ने प्रयास गर्नुहोस्‌।
सजिलो काम पहिला गर्नुहोस्‌। एम्बर नाम गरेकी युवती यसो भन्छिन्‌: “यदि कुनै काम पाँच मिनेटभन्दा काम समयमा भ्याइन्छ भने त्यो गरिहाल्नुपर्छ भनेर मलाई कसैले सिकाएको थियो। जस्तै: सफा गर्ने, लुगा झुन्ड्याउने, भाँडा माझ्ने र फोन गर्ने।”
महत्त्वपूर्ण काम पहिला गर्नुहोस्‌। बाइबल यसो भन्छ: “अझ महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हुन्‌, सो तिमीहरूले पक्का” गर। (फिलिप्पी १:१०) यो कुरा आफ्नो दैनिक जीवनमा कसरी लागू गर्न सक्नुहुन्छ? आना नाम गरेकी युवती यसो भन्छिन्‌: “मैले गर्नुपर्ने कामहरूको म सूची बनाउँछु र ती कामहरू कहिलेसम्म सिद्ध्याउनुपर्ने हो, त्यो पनि लेखेर राख्छु। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराचाहिँ, हरेक काम कहिले सुरु गर्ने र सिद्ध्याउने, त्यो मिति लेखेर राख्छु।”
के यसो गर्न गाह्रो छ जस्तो लाग्छ? फेरि एक चोटि विचार गर्नुहोस्‌! कुरा के हो भने, तपाईँले तालिका बनाउनुभयो भने समयले तपाईँलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा तपाईँले समयलाई नियन्त्रण गर्नुहुनेछ। अनि यसले तपाईँको तनाव कम गर्छ। केली नाम गरेकी एक किशोरी यसो भन्छिन्‌: “योजना बनाएकोले गर्दा म शान्त भएर बस्न सक्छु अनि कुन काम कहिले गर्ने भनेर ठीक तरिकाले सोच्न सक्छु।”
बाधा दिने कुराहरूलाई हटाउनुहोस्‌। जेनिफर यसो भन्छिन्‌: “कुनै महत्त्वपूर्ण काम सुरु गर्नुअघि म घरमा भएका सबैलाई थाह दिन्छु। यदि मैले केही गरिदिनु छ भने मेरो काम सुरु हुनुअघि नै भन्‍नुहोस्‌ भनेर बताउँछु। म आफ्नो फोन र इमेल अलर्टस्‌ पनि अफ गर्छु।”
सुझाव “तपाईँले गर्नुपर्ने कामहरू नगरेसम्म त्यो जस्ताको तस्तै रहन्छ। त्यसैले कुनै काम गर्नु छ भनेर जहिले पनि सोचिरहनुको सट्टा सिद्ध्याइहाल्नुहोस्‌। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँको बाँकी दिन मजाले बित्नेछ।”—जोर्डन
कामकुरो पन्छाउने बानीबारे क्विज खेलौँ।
सही वा गलत
१. तपाईँले कुनै पनि कामकुरो पन्छाउनु हुँदैन।
२. कामकुरो पन्छाउने बानी नै लागिसकेको छ भने पनि त्यसलाई हटाउन सकिन्छ।
३. कामको दबाब हुँदा काम सधैँ राम्रोसँग गर्न सकिन्छ।
४. कामकुरो पन्छाउने बानी आमाबुबाबाट वंशानुगत सर्ने कुरा हो।
१. गलत। तपाईँसँग कामकुरो पन्छाउने राम्रो कारण हुन सक्छ। उदाहरणको लागि, थप समय लिँदा तपाईँले आफ्नो कामसम्बन्धी अझ धेरै जानकारी बटुल्न, योजना बनाउन वा राम्रो छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।—बाइबल सिद्धान्त: हितोपदेश २१:५.
२. सही। नराम्रो बानीलाई हटाउन सकिन्छ। मुख्य कुरा भनेको आफ्नो नराम्रो बानी हटाएपछि कस्ता फाइदाहरू हुन्छन्‌, त्यसमा ध्यान दिनु हो।—बाइबल सिद्धान्त: एफिसी ४:२२, २३.
३. गलत। प्रायजसो हामी यसो गर्न सक्दैनौँ। वास्तविकता के हो भने, पर्याप्त समय लगायौँ र पहिल्यै राम्ररी सोचविचार गऱ्‍यौँ भने काम सबैभन्दा राम्रो हुन्छ।—बाइबल सिद्धान्त: हितोपदेश १५:२८.
४. गलत। तपाईँको आमा वा बुबामा कामकुरो पन्छाउने झुकाव भए तापनि वैज्ञानिकहरूले कामकुरो पन्छाउने झुकाव वंशानुगत समस्या हो भनेर प्रमाणित गर्न सकेका छैनन्‌।—बाइबल सिद्धान्त: गलाती ६:५.
शेयर गर्ने शेयर गर्ने कामकुरो पन्छाउने बानीलाई के गर्ने होला?